မုန့်ဟင်းခါး ထဲ လူတိုင်းလိုလို ထည့်စားတတ်တဲ့ အကြော် ရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်အကြောင်း – Real Thadin
မုန့်ဟင်းခါး ထဲ လူတိုင်းလိုလို ထည့်စားတတ်တဲ့ အကြော် ရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်အကြောင်း
July 5, 2019 Siberian Bird Knowledge 0
ဟင် ဘာလားပေါ့… ဒီအကြော်တွေကအများကြီးစားရင် ရင်ပူတယ်တဲ့
အဲ့တော့မှ ပလပ်စတစ်ထည့်ကြော်တာနေမှာဆိုပီး လန့်သွားတာ.. အာ့နဲ့ စားလက်စ အကြော်ထုတ်လေး ဘေးချပီး အိမ်အမြန်ပြန်ပြေးပီး လက်ထိုးအန်ကြရရော…. ဗိုက်ထဲရောက်သွားရင် ဘယ်လို ဖြစ်သွားမလဲ သိချင်စိတ်နဲ့ ဖြဲ ရဲ ကြည့်တော့ အလား လား အကြော်တွေက ပလပ်စတစ်လိုလို ရာဘာ လိုလို ဖြူဖြူတွေ လက်နဲ့ ဖျစ်လည်း မကြေဘူးနော်…
လမ်းပေါ်မှာ ရောငိးနေတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်တိုင်း ဒီအကြော်တွေ သုံးကြပါတယ်… တနေ့ တနေ့ လူတွေ ဘယ်လောက်တောင် စားမိနေလဲ….
Credit – Thae Su Hlaing
အကွျောလေးကကောငျးလိုကျတာဆိုပီး အကွျော လေး ၂ဝဝဖိုး အပိုရောငျးပေးပါဆိုပီး စားမိတော့ အရမျးကွိုကျပီး အထုတျကွီး တထုတျလောကျ ထပျရောငျးပေးပါ လို့ ဝယျရော….
ဟငျ ဘာလားပေါ့… ဒီအကွျောတှကေအမြားကွီးစားရငျ ရငျပူတယျတဲ့
အဲ့တော့မှ ပလပျစတဈထညျ့ကွျောတာနမှောဆိုပီး လနျ့သှားတာ.. အာ့နဲ့ စားလကျစ အကွျောထုတျလေး ဘေးခပြီး အိမျအမွနျပွနျပွေးပီး လကျထိုးအနျကွရရော…. ဗိုကျထဲရောကျသှားရငျ ဘယျလို ဖွဈသှားမလဲ သိခငျြစိတျနဲ့ ဖွဲ ရဲ ကွညျ့တော့ အလား လား အကွျောတှကေ ပလပျစတဈလိုလို ရာဘာ လိုလို ဖွူဖွူတှေ လကျနဲ့ ဖဈြလညျး မကွဘေူးနျော…
အဲဒါနဲ့ အကွျောထုတိ ကွီးယူပီး မီးဖိုပျေါတငျ ပွုတျကွညျ့ကွပွနျရော… အမလေးလေး ၁ဝမိနဈလောကျ ပွုတျတာတောငျ ပုံစံ မပကျြတဲ့ ကိုရှအေကွျောတှကေို လလေ့ာကွညျ့ကွပါ…
လမျးပျေါမှာ ရောငိးနတေဲ့ မုနျ့ဟငျးခါးဆိုငျတိုငျး ဒီအကွျောတှေ သုံးကွပါတယျ… တနေ့ တနေ့ လူတှေ ဘယျလောကျတောငျ စားမိနလေဲ….
နေပြည်တော်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကို သမ္မတကိုယ်တိုင် အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ဖြင့် စစ်ဆေးသင့်ဟု ဆို
မူကြိုကျောင်းသူ တရားမျှတရေးအတွက် ရန်ကုန်မှာဆန္ဒပြနေပြီ
ယနေ့ ညနေ ၄ နာရီက ဖြစ်သွားတာပါ ၀န်ထမ်းတဦး ဓာတ်လိုက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ပါ ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ
ဩစတြေးလျမှာ သဲမုန်တိုင်းကြီးတိုက်မှုနဲ့ ကြီးမားတဲ့ မိုးသီးကြွေမှုများ ဖြစ်ပေါ်
အာဖရိကဒေသရှိ နိုင်ငံမှာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ကိုရင် သီလရှင်တွေများပြားလာပြီး ဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်ပွားနေပါပြီ
မြန်မာပြည်သူများအတွက် ၀မ်းသာစရာညနေခင်းသတင်းလေးပါ ICJ မှ ထုတ်ပြန် အမိန့်စာ